हामी आफ्नै हातले एक गर्मी पोशाक बनाउन
पसलमा जाँदै कति, हामी हाम्रो प्रस्ताव व्यावसायिक उद्यम को एक विस्तृत श्रृंखला हेर्नुहोस्। तर यो उपयुक्त आउँदा, यो देखिन्छ हामी धेरै आकर्षित छन् जो पोशाक, इच्छित आकार कि, छैन। यस मामला मा, त्यहाँ कार्य दुई सम्भव कोर्स हो। पहिलो, हामी पसलमा छोड्न, अर्को ब्याच को विक्रेता वितरण सोध्नुहोस्। दोस्रो, हामी, मौन मा छोडेर हुनुहुन्छ ठीक नै गर्मी बनाउन निर्णय आफ्नै हातले पोशाक।
कार्य अन्तिम पाठ्यक्रम धेरै लोभ्याउने जस्तो देखिन्छ। आखिर, हामी मात्र आफ्नो दराज Replenish, तर पनि हाम्रो स्तर द्वारा विशेष सिलना गरिएको कुराहरू मालिक बन्न सक्षम छन्। यस्तो उत्पादनहरु किनभने सबै nuances हाम्रो तागत बृद्धि गर्न मद्दत र कमीकमजोरी लुकाउन खातामा खिचिएको निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको बेला "को आंकडा मा बस्न" सधैं छन्। किन गैर-मानक आकारहरू वा ठूलो आकार संग महिलाहरु, मुख्यतया सी वा आफ्नै हातले एक गर्मी पोशाक बाँध कसरी रुचि हो यो।
उत्तरार्द्ध विधि तपाईं राख्न मात्र होइन हप्तादिन मा तर पनि उत्सव मा गर्न सक्ने धेरै रोचक कुराहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो कहिलेकाहीं लाग्छ हुनत धेरै समय तिनीहरूलाई बनाउन। तपाईं एक समस्या छ भने, तर नयाँ लुगा जस्तै, चिन्ता छैन। सिलाई पक्कै तपाईं चाँडै आफ्नो हात संग एक पोशाक सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
सुरू गर्न, यो शैली परिभाषित गर्न आवश्यक छ। तपाईंलाई थाहा छैन भने तपाईंले ठ्याक्कै चाहनुहुन्छ, फैशन पत्रिका को पृष्ठ स्क्रोल। सायद केही तस्बिर नयाँ छवि लागि आफ्नो खोज मा सुरु बिन्दु हुनेछ। यो उद्देश्यले एक गर्मी आफैलाई पोशाक बनाउन निर्णय भएकाहरूलाई लागि हो कि विशेष पत्रिका किन्न लायक पनि छ। यहाँ, समाप्त उत्पादन को फोटो बाहेक, तपाईं ढाँचा पाउन सक्नुहुन्छ। नियम, यो बहुमुखी छ र धेरै आकार गर्न साथ डिजाइन गरिएको छ। तपाईं कागज वा अन्य पारदर्शी कागज, आफ्नो मापदण्डहरू मेल खाने रूपरेखा वरिपरि कटौती tracing साथ सशस्त्र गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो पछि बाहिर काटन र सिलाई गर्न अगाडि बढ्न सम्भव हुनेछ। मुख्य कुरा - बिस्तारै र धेरै ध्यान दिएर काम गर्न।
तथापि, तपाईं निश्चित जब तपाईं तयार बनाएको ढाँचाहरू प्रयोग, लगातार ठ्याक्कै एउटै outfit मा एक महिला भेट्न मौका बढ्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान गर्नुपर्छ। यो तपाईं अनुरूप गर्दैन भने, त्यसपछि निर्णय , आफ्नै हातले एक गर्मी पोशाक सी गर्न आफैलाई स्केच।
सायद यो काम तपाईं फेशन डिजाइनर को आफ्नो makings प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ, र त तपाईं मेरो सबै आफ्नै लुगा बनाउने गरिने आफूलाई। प्रत्यक्ष उत्पादनहरु लागि ढाँचाको निर्माण संग खडा सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि, कल्पना देखाउन, तपाईं यसलाई तल विस्तार, वा गहिरो कट गरेर समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सी गर्न आफ्नै हातले एक गर्मी पोशाक त गाह्रो छैन। मुख्य कुरा इच्छा र एक सिलाई मेशिन, साथै एक उपयुक्त सामाग्री खरिद गर्न छ। नमुना निर्माण संग सजिलै उच्च स्कूलमा आफ्नो श्रम पाठ उहाँ सम्झनुहुन्छ, हरेक महिला सामना। तर एक पल्ट यो पहिले नै त गरिरहेको छ, र यसैले सबै सफल हुनुपर्छ।
कसरी आफ्नै हातले अस्पताल देखि छुट्टी मा एक सुन्दर धनुष बनाउन
मुद्दा एक श्रृंखला - श्रृंखला सिलाई
मोती बनेको लेख: को सादगी र विशिष्टताको
Openwork ब्लाउज कुरा: चित्र र वर्णन, ढाँचाहरू र मोडेल
Ozerninskoe Reservoir - माछा मार्ने स्थान
विवरण र आवश्यकताहरु: ट्रक लागि Underride गार्ड
फिल्म "200 पाउण्ड सौन्दर्य": अभिनेता, भूमिकाको, समीक्षा र टिप्पणीहरू
जीन्स कसरी सही तरिकाले सिलाई गर्ने?
मानिसहरूको अंग्रेजी नाम: आफ्नो मूल को कथा
एन्टोनियो Banderas हृदय आक्रमण भएको थियो
एक प्रशासनिक ठेस को निर्णय को अपील कस्तो छ?
होटल ग्रान्ड होटल Kempinski: एक वर्णन, मूल्यांकन, पर्यटक समीक्षा